Fanabeazana mampiaty : Tsy ny olona manana fahasembanana ihany no voakasika – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Fanabeazana mampiaty : Tsy ny olona manana fahasembanana ihany no voakasika
Fanabeazana mampiaty : Tsy ny olona manana fahasembanana ihany no voakasika
Hankalaza voalohany ny ” Androm-pirenena ho an’ny fanabeazana mampiaty” i Madagasika amin’ny 26 novambra ho avy izao. Ny lohahevitra entina hankalazana izany dia ny hoe “fanabeazana mampiaty, samihafa mifandray, mitovy zo, miara -beazina ho soa. Tanjona ny tsy hisian’ny fanilikilihana intsony ary ny fitovian-jon’ ny olona rehetra na any an-tsekoly na eo anivon’ny fiarahamonina.
Tsy ny olona manana fahasembanana ihany no voakasiky ny fanabeazana mampiaty fa ao koa ny olona marefo dia ny ankizy sy tanora nitsoaka fianarana andaharana na tsy tafiditra an-tsekoly mihitsy, ny tanora sy ankizy vavy niteraka aloha, ny ankizy voafonja, ny ankizy sy tanora avy amin’ny fianakaviana sahirana ary ireo any an-dakilasy manana olana amin’ny fanovozana fahalalana.
Hetsika hatao mandritra io fankalazana io ny fanentanana sy fandresen-dahatra ny olona rehetra hanana fijery mitovy amin’ny fampiatiana amin’ny alalan’ny fampiratiana hotohizana fifanankalozan-kevitra. Hotetezina koa ny minisitera telo misahana ny fanabeazana hampitoviana izay fomba fijery izay. Efa misy efitrano fianarana manaraka ny filàna na dia mbola mila ezaka goavana aza hoy ny talen’ny fanabeazana , Mamba Serge Dieudonné.
Mpampianatra miisa 3449 no efa nisitraka fiofanana momba izany hoy hatrany ity tale ity, ary sekoly manodidina ny 282 no nisitraka ny fanabeazana mampiaty.
Fihibohana : ny ankizy no hita milalao eny an-dalana
SEMIPI: mangarahara ny fifaninanana
Andro ratsy: tafiditra an-tanety ao avaratr’i Maintirano ny ivony
Commune urbaine de Mahajanga: délivrance des permis de construire en 45 jours
Santé mère et enfant : 17 millions de personnes touchées par le programme Access
Antontan’isa covid-19 : nihena ny isan’ireo tranga vaovao sy ireo lavo